Koonka waa maxay: astaamaha, qaab dhismeedka iyo arrinta madoow | Saadaasha Shabakadda
Caalamka waa maxay
Jarmal Portillo | 19/07/2021 10:15 | Astronomy
¿Caalamka waa maxay? Waa mid ka mid ah su’aalaha saynisyahannadu inta badan taariikhda is weydiiyaan. Xaqiiqdii, koonku waa wax walba, iyada oo aan laga reebin. Waxaan ku dari karnaa arrinta koonka, tamarta, booska iyo waqtiga iyo wax kasta oo jira. Si kastaba ha noqotee, markaad ka hadlayso waxa koonku yahay, tixraac dheeraad ah ayaa lagu sameeyaa banaanka sare ee meeraha Dunida.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa caalamku yahay, astaamahiisa iyo aragtiyaha qaar.
1 Caalamka waa maxay
2 Abuuritaan iyo halaag
3 Muhiimadda arrinta madow
4 Antimatter iyo tamar mugdi ah oo ku jira koonka
Adduunku waa weyn yahay, laakiin waxaa laga yaabaa inuusan xad lahayn. Hadday sidaas tahay, waxaa jiri lahaa arrin aan dhammaad lahayn oo ku jirta xiddig aan dhammaad lahayn, oo aan sidaa ahayn. Taas bedelkeeda, marka loo eego arrinta, ugu horreyn waa meel bannaan. Dadka qaar xitaa waxay ku andacoodaan in koonkan aan ku nool nahay aysan dhab aheyn, waa hologram.
Koonka la yaqaan wuxuu ka kooban yahay galaxyo, kooxo galax ah, iyo qaab-dhismeedyo weyn oo loo yaqaan 'superclusters', iyo sidoo kale arrin dhex-dhexaad ah. In kasta oo tikniyoolajiyadda casriga ah ee maanta la heli karo, haddana wali si rasmi ah uma garanno cabbirkeeda. Maaddada looma qaybiyo si isku mid ah, laakiin waxay ku urursan tahay meelo cayiman: galaxies, xiddigaha, meerayaasha, iwm. Si kastaba ha noqotee, 90% jiritaanka waxaa loo haystaa inay tahay arrin mugdi ah oo aynaan daawan karin.
Adduunku wuxuu leeyahay ugu yaraan afar cabbir oo la yaqaan: seddex meel oo bannaan (dherer, dherer, iyo ballac) iyo mid ka mid ah waqtiga. Awooda cuf isjiidadka dartiis, wey isku dhagan tahay oo si isdaba joog ah ayey u dhaqaaqdaa. Marka la barbardhigo cirka, dhulkeenu aad ayuu u yar yahay. Waxaan qayb ka nahay nidaamka qorraxda, oo ku luntay gacmihii Milky Way. Milky Way wuxuu leeyahay 100.000 bilyan oo xiddigood, laakiin waa uun mid ka mid ah boqolaal bilyan oo galaxisyo ah oo ka kooban nidaamka qorraxda.
Abuuritaan iyo halaag
Aragtida Big Bang waxay sharraxaysaa sida loo aasaasay. Aragtidan oo qiyaastii 13.700 bilyan oo sano ka hor ahayd, arrintu waxay lahayd cufnaan aan dhammaad lahayn iyo heer kul. Waxaa dhacay qarax xoog leh oo cufnaanta iyo heerkulka koonku way sii yaraanayeen ilaa waqtigaas.
Big Bang waa keli ahaan, marka laga reebo oo aan lagu sharixi karin sharciyada fiisigiska. Waan garan karnaa wixii dhacay bilowgii, laakiin weli ma jiro sharraxaad cilmiyaysan oo ku saabsan daqiiqadda eber iyo cabbirka eber. Ilaa inta qarsoodigaan laga furayo, saynisyahannadu awood uma yeelan doonaan inay si hubaal ah u sharxaan waxa caalamku yahay.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira aragtiyo taxane ah oo mala-awaal kadib sharraxa sida ay u maleynayaan dhamaadka koonka inuu noqon doono. Marka hore, waxaan ka hadli karnaa qaabka Xayiraadda weyn, kaas oo ina faraya in balaadhinta koonku ay sababi doonto (bilyan gudahood) dhamaan xidigaha, taas oo keenaysa adduun qabow iyo mugdi ah.
Waxaan sidoo kale xusi karnaa aragtida ah Rip Big , arrinta.
Muhiimadda arrinta madow
Astrophysics, qaybaha cosmic aan ka ahayn baryonic arrinta (arrinta caadiga ah), neutrinos, iyo tamar mugdi ah waxaa loo yaqaan arrinta madow. Magaceedu wuxuu ka yimid xaqiiqda ah inuusan sii deynin shucaaca elektromagnetic-ka ama uusan la macaamilin shucaaca elektromagnetic sinnaba, taasoo ka dhigaysa mid aan la arki karin dhammaan qaybaha shucaaca elektromagnetic-ka. Si kastaba ha noqotee, waa inaan lagu jahwareerin antimatter.
Maaddada madow waxay u taagan tahay 25% wadarta guud ee koonka, iyadoo ay ugu wacan tahay saameynta culeyskeeda. Waxaa jira astaamo adag oo jiritaankiisa ah, kuwaas oo lagu ogaan karo walxaha xiddigiska ee ku xeeran. Xaqiiqdii, suurtagalnimada jiritaankeeda waxaa markii ugu horreysay la soo jeediyay 1933, markii cirbixiyeenka reer Switzerland iyo fiisikiska Fritz Zwicky uu tilmaamay in "tiro aan la arki karin" ay saameyneyso xawaaraha orbital ee kooxaha galaxy. Tan iyo markaas, indha indheyn kale oo badan ayaa si joogta ah u tilmaamay inay jiri karto.
Wax yar baa laga ogyahay arrinta madow. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa wax dahsoon, laakiin hal suurtagal ayaa ah in ay ka kooban tahay neutrinos culus oo caadi ah ama walxo aasaasi ah oo dhowaan la soo jeediyey (sida WIMPs ama axon), oo kaliya in la magacaabo wax yar. Jawaabta cad ee ku saabsan halabuurkeedu waa mid ka mid ah su'aalaha ugu waaweyn ee cosmology casri ah iyo fiisigiska walxaha.
Jiritaanka maaddada madow waa muhiim si loo fahmo qaabka Big Bang ee samaynta koonkan iyo qaababka dabeecadda walxaha bannaan. Xisaabinta cilmiga ah waxay muujineysaa inay jiraan waxyaabo aad uga badan inta la arki karo. Tusaale ahaan, dabeecadda la saadaaliyay ee galaxyadu inta badan way is beddeshaa sabab la’aan, illaa ay jirto suurtagalnimada in arrinta aan la arki karin ay ku dhaqaaqdo isbeddel cufis ah oo ku saabsan arrinta muuqata.
Antimatter iyo tamar mugdi ah oo ku jira koonka
Waa inaannaan isku khaldin arrinta madow iyo antimatter. Qaybta dambe waa nooc ka mid ah arrimaha caadiga ah, sida arrinta na ka kooban, laakiin waxay ka kooban tahay qaybo hoose oo leh calaamado koronto oo iska soo horjeedda: togan / taban.
Elektron-ka-lidka waa qayb ka mid ah antimatter-ka, kaas oo u dhigma koronto, laakiin wuxuu leeyahay qiime togan halkii uu ka noqon lahaa lacag diidmo. Antimatter kuma jiro qaab xasiloon maxaa yeelay waxay baabi'isaa maadada (taas oo ku jirta saamiga ugu badan), sidaa darteed isuma abaabusho atomyo la arki karo iyo molikuyuullo. Antimatter waxaa kaliya lagu heli karaa iyada oo loo marayo xawaareyaasha walxaha. Si kastaba ha noqotee, soo saarkeedu waa mid dhib badan oo qaali ah.
Tamarta mugdiga ahi waa nooc ka mid ah tamarta ka jirta koonkan oo dhan waxayna u janjeertaa inay dardar-geliso ballaadhintiisa iyadoo la celinayo culeyska ama xoogga. Waxaa lagu qiyaasaa in 68% walaxda tamarta leh ee koonkan iska leh noocan, waana nooc tamar isku mid ah oo aan la falgalin xoog kale oo aasaasi ah oo koonka ku jira, waana sababta loogu magac daray "mugdi". Laakiin, mabda 'ahaan, wax xiriir ah kuma laha arrinta madow.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan waxa koonku yahay, asalkiisa iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Caalamka waa maxay